JunkCoin စျေး - အွန်လိုင်း JKC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို JunkCoin (JKC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ JunkCoin (JKC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ JunkCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
JKC – JunkCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ JunkCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
JunkCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
JunkCoinJKC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.486JunkCoinJKC သို့ ယူရိုEUR€0.409JunkCoinJKC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.37JunkCoinJKC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.441JunkCoinJKC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr4.35JunkCoinJKC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.05JunkCoinJKC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč10.69JunkCoinJKC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.8JunkCoinJKC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.645JunkCoinJKC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.675JunkCoinJKC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$10.86JunkCoinJKC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.76JunkCoinJKC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.57JunkCoinJKC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹36.37JunkCoinJKC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.81.68JunkCoinJKC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.665JunkCoinJKC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.731JunkCoinJKC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿15.07JunkCoinJKC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.37JunkCoinJKC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥51.3JunkCoinJKC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩575.84JunkCoinJKC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦187.66JunkCoinJKC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽35.42JunkCoinJKC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴13.44
JunkCoinJKC သို့ BitcoinBTC0.00004 JunkCoinJKC သို့ EthereumETH0.00122 JunkCoinJKC သို့ LitecoinLTC0.0082 JunkCoinJKC သို့ DigitalCashDASH0.00529 JunkCoinJKC သို့ MoneroXMR0.00544 JunkCoinJKC သို့ NxtNXT38.87 JunkCoinJKC သို့ Ethereum ClassicETC0.0662 JunkCoinJKC သို့ DogecoinDOGE138.63 JunkCoinJKC သို့ ZCashZEC0.00515 JunkCoinJKC သို့ BitsharesBTS18.49 JunkCoinJKC သို့ DigiByteDGB18.61 JunkCoinJKC သို့ RippleXRP1.59 JunkCoinJKC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0166 JunkCoinJKC သို့ PeerCoinPPC1.63 JunkCoinJKC သို့ CraigsCoinCRAIG218.93 JunkCoinJKC သို့ BitstakeXBS20.49 JunkCoinJKC သို့ PayCoinXPY8.39 JunkCoinJKC သို့ ProsperCoinPRC60.28 JunkCoinJKC သို့ YbCoinYBC0.000258 JunkCoinJKC သို့ DarkKushDANK154.06 JunkCoinJKC သို့ GiveCoinGIVE1039.83 JunkCoinJKC သို့ KoboCoinKOBO105.57 JunkCoinJKC သို့ DarkTokenDT0.447 JunkCoinJKC သို့ CETUS CoinCETI1386.53
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 19:15:02 +0000.